Rangarira zvinhu zvese zvinogoneka kune avo vanotenda. - Gail Devers - Quotes Pedia
Rangarira zvinhu zvese zvinogoneka kune avo vanotenda. - Gail Vanoshanduka
Kuzvitenda pachako kunoreva kuzvivimba. Zvakakosha kuve nekutenda mukati mako nebasa rauri kuita, ipapo chete ndipo paunogona kusimuka kuti ubudirire uye ufare. Kuzvitenda ndiko kiyi huru kubudirira. Ukangotenda iwe pachako, unogona kurega kutya kutadza. Kana iwe uchishayiwa kutenda uye kutenda, iwe unoshaya chiitiko, uye nekudaro, iwe unenge usiri kuwana zvakakwana guts kuzvimiririra.
Vanhu vasingazvitendi ivo pachavo vanozopedzisira vasisina chivimbo chekuita chimwe chinhu, uye nekudaro, ivo vanowanzoisa dura ravo rakaderera. Vanhu vanoshaya kutenda pachavo vanozopedzisira vazvikoshesesa uye nekudaro, vanozozvishingisa. Nekudaro, havazokwanise kumhanya nesimba ravo rose voenderera kumberi.
Iko hakuna chinonzi 'zvisingaite'. Zvese zvaunoda kuti uzvitende, uye une chokwadi chekuzadzisa zvese zvauri kufunga nezvazvo! Kuzvigamuchira pachako kwakanyanya kukosha. Ukangokwanisa kuona kukosha kwako, unozogona kuve nekutenda mukati mako.
Munhu anogamuchira chokwadi chekuti ari kufamba nenzira kwayo achazowana nzira yekumusvitsa kwaanenge achienda. Kwete. kana usina chokwadi nezvako, iwe unoramba uri mune dambudziko kana iwe uri kufamba munzira kwayo.
Tenda Kukurudziro Quotes
Tenda Zvinosimudzira Quotes
Tenda Quotes Mifananidzo
Best Quotes dzeNguva Dzose
Nhepfupi Makuru Quotes
Ipfupi Yekukurudzira Quotes
Ipfupi Inokurudzira Quote
Chengetedza zviroto zvako zviri zvipenyu. Kunzwisisa kuti uwane chero chinhu chinoda kutenda uye kutenda mauri, chiratidzo, kushanda nesimba, kutsunga, uye kuzvipira. - Gail Vanoshanduka
Zviroto zvinogona kukuendesa kune kubudirira. Munhu asingatomborote haazombokwanisa kusvika chero kupi.…